उत्तर कोरियाली नेता उनकी श्रीमती वर्ष दिनपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिइन् - Gandak News
शुक्रबार पोखराका थप १२ जनामा कोरोना पुष्टि
वामदेवको सक्रियता तीव्र, प्रचण्डलाई भेट्न बिहानै पुगे खुमलटारमा
ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
बहिनीलाई टिकटक बनाउन घरमा डाक्दै, बलात्कार गर्दै ! १९ वर्षीय युवक पक्राउ
पोखराको वसुन्धरा पार्कमा युवक मृत फेला, शव नजिकै विषको बोतल
उत्तर कोरियाली नेता उनकी श्रीमती वर्ष दिनपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिइन्
गण्डक न्यूज द्वारा ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १४:०९ मा प्रकाशित 0
एजेन्सी – उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनकी श्रीमती एक वर्षभन्दा लामो समयपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छन् । उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार रि सोल जु श्रीमान् किमसँगै मंगलबार एक कार्यक्रममा उपस्थित भएकी हुन् ।
किमका स्वर्गीय पिता तथा उत्तर कोरियाका पूर्व नेता किम जोङ इलको जन्मोत्सव कार्यक्रममा किमकी श्रीमती रि देखिएकी हुन् । लामो समय रि सार्वजनिक रुपमा नदेखिदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न शंका व्यक्त गरिँदै आइएको थियो ।
महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा नेता किमसँगै देखिने गरेकी रि गत वर्षको जनवरी यतादेखि सार्वजनिक रुपमा देखिएकी थिइनन् । रि को उपस्थितिले उनीमाथि गरिएको गर्भावस्था वा स्वास्थ्य अवस्थाको शंकालाई टारिदिएको छ ।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय गुप्तचर विभागले भने कोरोना महामारीका कारण रि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएको बताएको छ । साथै, आफ्ना बालबच्चासँग समय बिताउनका लागि पनि बाहिर नदेखिएको बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाका अधिकारीहरुले अहिलेसम्म देशभित्र कोरोना भाइरस संक्रमण कसैलाई पनि नदेखिएको दावी गर्दै आएका छन् । तर विज्ञहरुले भने यसलाई असम्भव भनेका छन् ।
छोरालाई पिँठ्यूमा बोकेर ठेला चलाउँदै…